Maxaa ka dhalan kara colaadda ka dhex-oogan Puntland iyo Somaliland ? Waraysi (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 5, 2018 11:27 b 0
Tan iyo bilawgii sannadkaan 2018, gobolka Sool waxaa oa oognayd colaad u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland, kadib markii ciidamada Somaliland ay qabsadeen Tukaraq oo ahayd bar-koontarool oo Puntland ah, misna uu yaallay Kastam Canshuureed oo ay leedahay wasaaradda maaliyaddu, kaasoo dakhli badani ka soo xaroon jiray.
Qabsashadaasi Somaliland ee Tukaraq, waxay daaha la rogtay colaad in badan dabool saarnaa, taasoo Puntland ay ka maaganaysay dagaal ay la gasho Somaliland oo horay Puntland uga qabsatay magaalada Laascaanood sannadkii 2007-dii, kuna sii darsatay qabsiga deegaanno kale oo gobolka Sool ah sannado ka dambeeyey qabsigii Laascaanood.
Puntland ayaa abaabul xoog leh u gashay dib-u-xoraynta deegaannada gacanteeda ka maqan, waxaana dhacay labo jeer oo hore dagaallo sababay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ay ku dagaallameen Tukaraq.
Labada maamul ee haatan is collaystay, diriruhuna ay dhexmareen sannadkaan, welina dagaalka ku foogan ee Puuntland iyo Somaliland ayaa ah labadii maamul ee ugu dhismaha horreeyey wixii ka dambeeyey burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ee sannaddii 1991dii.
Sidoo kale waxay ahaayeen labada maamul ee xagga xiriirka bulsho, isku socodka, iyo ganacsiga ugu ballaarani ka dhaxeeyo, ammaan ahaanna ugu deggan gobollada Soomaaliya, balse haatan u muuqda kuwo dhiig faraha la siigelaya.
Haddaba dagaalladaani maxay u dhimi karaan xiriirkiii iyo ganacsigii labada dhinacba ka dhaxeeyey, muxuuse yeeli karaa ammaankooda gudaha, su’aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan waydiinay Siyaasi Cabdiweli Seed Cilmi oo xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland.